Famerana ny isan'ny lahatsoratra hita ao amin'ny Wix Forum - Ne gerekir?
Famerana ny isan'ny lahatsoratra hita ao amin'ny Wix Forum
Wix forum, sehatra forum Wix, olana forum Wix
Ny tontolon'ny asa
Ny mpanamboatra tranokala Wix dia ahafahanao mamorona forum mora ho an'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fisintonana sy fandatsahana ny fitaovana Wix Forum eo amin'ny pejinao. eo amin'ny sisiny havia "Applications" avy amin'ny ampahany "Forum Wix"Afaka manomboka amin'ny fitadiavana ianao
Ny forum dia toerana ifanakalozan-kevitra mifototra amin'ny tranonkala momba ny lohahevitra iray manokana. Ampiasaina matetika ny forum mba hampitomboana ny fahitana ny fifanakalozan-kevitra sy hanamora ny fitahirizana.
Amin'ny fanokafana sokajy ao amin'ny Wix Forum, manampy lahatsoratra voafetra ary mampiseho ity sokajy ity amin'ny pejin'ny Forum.
Fanomezana fetra isan'ny fahatsapana avy amin'ny fizarana filaharana amin'ny alàlan'ny plugin Wix Forum.
Ho an'ireo izay manana asa maika dia namela fanazavana fohy vitsivitsy ato amin'ity fizarana ity. Ity dia tena fohy kokoa sy tsy feno noho izay tokony hovakianao.
Te hametra ny isan'ny lahatsoratra aseho ao amin'ny Wix Forum aho
Ny endri-javatra tadiavina dia izao: toerana ahafahantsika mametra ny isan'ny fijerena lahatsoratra rehefa manindry ny fitaovana Wix Forum. Na izany aza, tsy misy toerana toy izany ao amin'ny tabilao fanovana ankehitriny. Izany no nahatonga anay namolavola vahaolana manakaiky io fangatahana io.
Mametra ny fomba fijery amin'ny famoronana sokajy ao amin'ny Wix Forum
Mandehana any amin'ny pejy Forum.
Manampia sokajy misaraka.
Manampia lahatsoratra maro araka izay voafaritrao ao amin'ny sokajy misy anao.
Miverena amin'ny pejy forum. Tsindrio eo amin'ny fitaovana forum "Settings" Tsindrio ny bokotra.
"Fisehoana" > "Fikirana fandrafetana hafatra" Safidio ny sokajy noforoninao avy amin'ny fizarana.
Noho izany, hametra ny isan'ny hafatra naseho teo aloha amin'ny sokajy hafa ianao.
Mametra ny fomba fijery amin'ny plugin Wix Forum
Tsindrio eo amin'ny fitaovana forum "Settings" Tsindrio ny bokotra.
"fanampiny" avy amin'ny ampahany "Ampio amin'ny pejy" ary mifidiana pejy iray.
Rehefa avy nanao ny hetsika irina i Wix dia hitondra anao any amin'ny pejy nofidinao.
Tsindrio ny plugin.
"Settings" > "Komandy" > “Isan'ny hafatra haseho” Azonao atao ny mamaritra ny isan'ny lahatsoratra tianao haseho.
Noho izany, hametra ny isan'ny lahatsoratra naseho teo aloha ianao amin'ny alàlan'ny plugin manokana forum.
Vidin'ny Graphic Design 2022
➜ Vidiny matihanina
➜ Ahoana no tokony hanomezana ny vidiny?
➜ Lisitry ny vidin'ny 2022 sy ny taona lasa
Nametraka fanontaniana momba ny Wix
voavaha314 viewsNe Gerekir Fanamarihana novaina 06 / 01 / 2022 Raha sahirana amin'ny Wix ianao dia afaka manampy izahay. Mamaly ireo fanontaniana malaza indrindra izahay, asehoy anao ny fomba hahatonga ny tranokalanao Wix ho tsara.
NY MANAIKITRA MANKASITRAKA NY FAHAMARINAN'NY LALATANTSIKA
Momba ny manam-pahaizana
06/01/2022 at 11:27 - navalin'i
Misaotra an'Andriamanitra nisy nanontany an'ity 🙂
Kely ∣ 🇫🇷
06/01/2022 at 11:16 - navalin'i
Raha ny marina, tsy ampy ahy koa ny bokotra add image.
Manorata valinyhanafoana ny valin-
Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Sehatra takiana * nasiana marika izy ireo
Tehirizo ao anaty ity browser ity ny anarako, mailaka ary adiresy tranokala ho an'ny hevitra manaraka.
Fampianarana sy fifandraisana
Zavakanto sy fialamboly
Fikarakarana manokana sy fombany
Biby fiompy sy biby
Fiara sy fiara hafa
Ahoana ny fomba hahitana sary mangarahara amin'ny Google
Recipe mofomamy mofomamy Apple
Tombontsoa ara-pahasalamana voajanahary amin'ny crocus mangidy